box ရောနှောရောစပ်ရန်အရသာအိမ်လုပ်နည်း (အကြံပြုချက် ၅ ချက်) - ဘလော့ဂ်
box ရောနှောအောင်လုပ်နည်းသည်လွယ်ကူသောအဆင့် ၅ ဆင့်တွင်အိမ်လုပ်အရသာရှိသည်
ဤသည် box ကိုရောနှောအိမ်လုပ်အရသာအောင်ဘယ်လိုဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျယောက်ျားတွေ, သိကြ, ငါဘယ်သူမှခြစ်ရာကနေဖန်ဆင်းတော်ကိတ်မုန့်ကိုချစ်ဘယ်သူမျှမက! ဒါပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ငါရောနှော box ကိုထုတ်တွေဆီကနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်အဘို့ အနီရောင်ကတ္တီပါကိတ်မုန့် ဒါမှမဟုတ် ချောကလက်ကိတ်မုန့် ငါကောင်းတဲ့အရသာချင်ပေမယ့်ခြစ်ရာကနေအချိန်မုန့်ဖုတ်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသည့်အခါ။ ဒါမှမဟုတ်ငါလိုအပ်သောလက်၌ရှိသမျှသောပါဝင်ပစ္စည်းများရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ အများကြီးဖြစ်ပျက်
သို့သော်လည်းငါသည်နေဆဲကြောင်းအရသာအရသာချင်! ငါတကယ်ဒီတော့ဒီမှာတစ်ဖြောင့်ဖွင့်သေတ္တာကနေလာနိုငျသော 'ဓာတု' အရသာမချစ်ကြဘူး box ကိုရောနှောအိမ်လုပ်အရသာအောင်ဘယ်လိုငါ့အကြံပေးချက်များ။
ခြစ်ရာကနေပိုကောင်း, box ကိုရောနှောသို့မဟုတ်မုန့်ညက်ရဲ့အဘယ်သို့သောအကြောင်းအဆုံးမဲ့ဆွေးနွေးငြင်းခုံရှိပါတယ်။ လူအများအပြားကဒီစစ်ပွဲကိုကျော်လွှားဖို့အတွက်လက်ယာဘက်စစ်ပွဲထဲရောက်သွားကြပါလိမ့်မယ်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ဘယ်သူ့ကိုဂရုစိုက်မှာလဲ။
box ရောနှောအသုံးပြုခြင်းသည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တိုတောင်းသောတစ်ခါတစ်ရံအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိတ်မုန့်အလှဆင်သူများစွာသည်သူတို့၏ကိတ်မုန့်အားလုံးအတွက် doctored box ရောနှောခြင်းကိုအသုံးပြုကြသည်။ သငျသညျတသမတ်တည်းရလဒ်များကိုရကလွယ်ကူသောရောစပ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ငါအကြံပြုမယ်လို့တစ်ခုတည်းသောအရာသင်သည်သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်ရှေ့ပြေးဖြစ်လိမ့်မည်။ အချို့သောနေရာများတွင်သင်သေတ္တာတစ်လုံးကိုအသုံးပြုသည်သို့မဟုတ်ကိတ်မုန့်တစ်ခုကိုကုတ်ခြစ်လိုက်သည်ဆိုပါကမည်သူမျှစိတ်ထဲမထားနိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့်ကျနော့်areaရိယာ (လက်ပံ) မှာရှိတဲ့လူတွေကသူတို့ကိုယ်ထဲဘာတွေထည့်ထားတယ်ဆိုတာကိုအလွန်အမင်းစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတယ် (လက်ပံတလန်ကတကယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်) ။
ဖောက်သည်များကကျွန်ုပ်အားအီးမေးလ်ပို့လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည်ခြစ်ရာမှဖုတ်လိုက်သည်။ ဒါကြောင့်ငါမေးခွန်းထုတ်စရာမရှိဒါငါ့သတင်းအချက်အလက်ငါ့ website တွင်ထားရန်သေချာဖြစ်၏။ သင်က doctored box ရောနှောအသုံးပြုနေတယ်ဆိုပါစို့။ သင်“ နေ့စဉ်လတ်ဆတ်သောမုန့်ဖုတ်” ကိုရိုးရှင်းစွာဖော်ပြနိုင်သည်။ သင်ခြစ်ရာကနေမုန့်ဖုတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တိကျသောစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများရှိပါကရိုးသားပါ။
ခြစ်ရာကနေဘယ်လိုမုန့်ဖုတ်ရမလဲဆိုတာကိုချက်ပြုတ်နည်းတွေပိုလိုချင်ရင်တော့ငါကြိုးစားခဲ့ပြီးပြီဆိုတာစစ်ကြည့်ပါ ကိတ်မုန့်ချက်ပြုတ်နည်းများ Sugar Geek ပြပွဲတွင်။
Box ရောနှောခြင်းကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နှင့်ပတ်သက်ပြီးနံပါတ် (၁) သည်အိမ်လုပ်အရသာဖြစ်သည်
ဖြစ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံး box box ကိုစတင်ပါ။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက် Duncan က Hines မိန်းကလေး။ စျေးနှုန်းကစူပါစျေးပေါတဲ့အရောအနှောထက်နည်းနည်းပိုစျေးကြီးပေမဲ့သင်ပေးဆပ်လိုက်ရတာကိုမင်းယုံတယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်။ ထည့်မပြောပါနှင့် Duncan က Hines များသောအားဖြင့်အရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်တာကြောင့်သင့်ရဲ့ထိပ်တန်းအရသာကိုသိုမှီးပြီးသင်ထွက်ကြည့်ရမည့်ရယ်စရာကောင်းတဲ့အသွင်အပြင်ကိုနှစ်သက်ပါ။
ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံး Duncan Hines box ရောနှောအရသာသည်အနီရောင်ကတ္တီပါ၊ Triple Chocolate၊ White Wake Cake (WASC အောင်) နှင့်စတော်ဘယ်ရီတို့ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်ချိန်မှာငါ duncan က hines စတော်ဘယ်ရီရှာမတွေ့နိုင်အောင်ငါ Betty Crocker နှင့်အတူသွားပါလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားအားလုံးခြစ်ရာကနေလုပ်ဖို့အချိန်တစ်တန်ယူ။ ငါ့ဖောက်သည်များအရှိဆုံးတောင်းဆိုထားသောအရသာများမှာသောချက်ပြုတ်နည်းများဖြစ်ကြသည်။ ဒီစာရွက်ရဲ့ချောကလက်ဗားရှင်းအတွက်ကျွန်တော့်ကိုစစ်ဆေးပါ ချောကလက် WASC စာရွက်
box ရောနှောအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာနံပါတ် ၂ မှာအရသာရှိတဲ့
များသောအားဖြင့် box ရောစပ်မှုသည်နောက်ကျောတွင်ပါ ၀ င်စေလိုသောအောက်ပါပါဝင်ပစ္စည်းများရှိသည်။ ကြက်ဥ၊ ရေနှင့်ဆီ။ လူတိုင်းလိုလိုမှာဒီပါဝင်ပစ္စည်းများရှိပြီးသား။
ချောကလက်ကိတ်မုန့်များအတွက်ရေအေးကိုကော်ဖီဖြင့်အစားထိုးပါ။ အဆိုပါကော်ဖီချောကလက်အရသာပိုမိုပြင်းထန်လာ! စာရွက်ကိုရယူပါ ချောကလက်
box ကိုရောနှောအိမ်လုပ်အရသာအောင်ဘယ်လိုသိကောင်းစရာ # 3
ခင်ဗျားကြားဖူးမှာပါ WASC (အဖြူရောင်ဗာဒံချဉ်မုန့်ကိတ်မုန့်) နှင့်ကဘာလဲဆိုတာသိချင်တယ်။ ၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်အချိန်ကုန်ဆုံးသောအကောင်းဆုံး doctored box ရောနှောစာရွက်ဖြစ်သည်။ ဒီကိတ်မုန့်ရဲ့အရသာ၊ အရောင်နဲ့အရသာကသေဖို့ပဲ။ သင်ဤမျှလောက်များစွာသောမုန့်ဖုတ်များအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအဖြူရောင်ကိတ်မုန့်လိုအပ်သည့်အခါဒါဟာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ၎င်း၏ရွေးချယ်မှု၏စာရွက်။
အဖြူရောင် Duncan Hines ရောစပ်သည့်သေတ္တာတစ်လုံးဖြင့်စတင်ပါ
granulated သကြား 1 ခွက်ကား
ရေသို့မဟုတ်နို့ 1 ခွက်ကား
1 Tsp ဗာဒံသီးထုတ်ယူ
သင့်ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုသင်၏ရပ်တည်သည့်အရောအနှော (သို့မဟုတ်သင်လက်ဖြင့်ရောစပ်နိုင်သည်) ပန်းကန်ထဲသို့ထည့်ပြီးစိုစွတ်သည့်အထိပေါင်းစပ်ရန်အနိမ့်အမြင့်ကိုနှိုးဆွပါ။ ထို့နောက်အလတ်စားအမြန်နှုန်းကိုတိုးမြှင့်ပြီးကိတ်မုန့်၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်တည်ဆောက်ပုံကို ၂ မိနစ်ခန့်ရောစပ်ပါ။
သင့်ရဲ့ Battery ကိုသင်၏ပြင်ဆင်ထားသောအိုးထဲသို့သွန်းလောင်းပါ။ ငါအသုံးပြုလိုသည် အိမ်လုပ်ဒယ်အိုး (ကိတ်မုန့်) ။ အဲဒီမှာအကောင်းဆုံးအိမ်လုပ်ဒယ်အိုးလွှတ်ပါ! 350ºFတွင်မုန့်ဖုတ်ခြင်းကို ၃၅-၄၀ မိနစ်ခန့်မှစင်ကာပူမှသွားတစ်ချောင်းသွားတစ်ချောင်းသွားသည်အထိသွားတိုက်ပါ။
box ကိုရောနှောအိမ်လုပ်အရသာအောင်ဘယ်လိုသိကောင်းစရာ # 4
သင့်ရဲ့ buttercream ခြစ်ရာကနေလုပ်ပါ။ ကျွန်တော်ဒီမှာလွယ်လွယ်ကူကူသွားဖို့ကြိုးစားနေတာကြောင့်ဒီအချက်ဟာတန်ပြန်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ဒီတစ်ခါလည်းသင်သည်ယခင်ကအိမ်လုပ် buttercream လုပ်ဖူးဘူးနှင့်သင်ခြိမ်းခြောက်နေပါတယ်။ ခင်ဗျားရဲ့စိတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးထားပါရစေ။
ငါ့ လွယ်ကူသော buttercream စာရွက် အရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်၊ အဲဒါကိုလိမ်တာဖြစ်နိုင်တယ်။ သင်၏ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုပန်းကန်လုံးထဲထည့်လိုက်ပြီး၎င်းသည်အလင်းနှင့် fluffy မဖြစ်မှီအထိရိုက်ပါ။ ထို့နောက်ပူဖောင်းများကိုဖယ်ရှားရန်၎င်းကိုလှော်တွဲခြင်းဖြင့် ၁၀ မိနစ်ခန့်ရောနှောပါစေ။
voila, ပြီးပြည့်စုံသောလွယ်ကူသော buttercream နှင်းခဲ။
ထိုအလမ်း, လမ်း, တစ် ဦး လုပ်နိုင်တဲ့ကနေနှင်းခဲထက်နည်းလမ်း WAY ။ ဒါကဘာလဲ?
သင်တို့အဘို့အခြားအကြီးအနှင်းခဲ options များ
တည်ငြိမ်သောနှင်တံမုန့် (fondant မပါဘဲ tier ဆင့်ကိတ်မုန့်များအတွက် ok)
Box ရောနှောအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာနံပါတ် ၅ မှာ
အချို့သော yummy ဖြည့်နှင့်အတူအရူးသွား! သင်ကသင်၏ကိတ်မုန့်ကိုအစမှနုတ်ချင်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်ကိတ်မုန့်တစ်ခုလုံးအတွက်ဖြည့်စွက်ခြင်းကိုခြစ်ရာဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပြီးသူတို့သည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။
မာရီယန် berry သီး buttercream
ကြည့်ရှုပါ, ဒါကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်မဟုတ်ခဲ့ သင်သည်သေတ္တာတစ်လုံးမှပြုလုပ်သောအရသာရှိသောကိတ်မုန့်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်သင်၏လမ်းပေါ်တွင်ရှိနေသည်။ သင်သည်သင်၏ box ကိုရောနှောအိမ်လုပ်အရသာစေရန်မည်သို့အချို့သောအကြံပေးချက်များရှိပါသလား? မှတ်ချက်များအတွက်သူတို့ကိုချန်ထားပါ!
Doctored Box Cake စာရွက် (WASC)
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိမုန့်ဖုတ်သမားများကောင်းစွာအသုံးပြုသောအရသာရှိသောအဖြူရောင်ကိတ်မုန့်ကိုခြစ်ရာအလားနီးပါးအရသာရှိသောထုတ်လုပ်ထားသောကိတ်မုန့်ကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဤစာရွက်သည် ၆'x2 'ကိတ်မုန့်သုံးခုသို့မဟုတ် ၈'x ၂' ကိတ်မုန့်သုံးခုကိုပြုလုပ်သည် ပြင်ဆင်ချိန် -၁၀ မိနစ် ချက်ပြုတ်ချိန် -၃၀ မိနစ် စုစုပေါင်းအချိန်:၄၀ မိနစ် ကယ်လိုရီ747kcal
▢၁ သတျတော (၁ သတျတော) အဖြူကိတ်မုန့်ရောနှော ငါ duncan က hines ကြိုက်တယ်
▢၅ oz (၁၄၂ ဆ) AP ဂျုံမှုန့် 1 ခွက် (ခွက်ထဲသို့ဇွန်းထိုး, scooped မဟုတ်)
▢၇ oz (၁၉၈ ဆ) သကြားဓာတ် ၁ ခွက်
▢၉ oz (၂၅၅ ဆ) ဒိန်ချဥ် 1 ခွက်ကိုအခန်းအပူချိန်
▢၈ oz (၂၂၇ ဆ) နို့ 1 ခွက်ကိုအခန်းအပူချိန်
▢၄ ကြီးမားသည် (၄) ဥအဖြူ အခန်းအပူချိန်
▢1/2 Tsp (၁ Tsp) ဗာဒံသီး
ဒီကိတ်မုန့်အတွက်ညွှန်ကြားချက်စူပါလွယ်ကူပါတယ်။ အခြေခံအားဖြင့်အရာဝတ္ထုများအားလုံးကိုပန်းကန်လုံးထဲသို့ထည့်ပြီးအလယ်အလတ်မြန်နှုန်းဖြင့် ၂ မိနစ်ရောစပ်ပါ။ Voila! ကိတ်မုန့် Battery ကိုအဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။ Battery ကိုပြင်ဆင်ထားသော ၈ ပေအိုးထဲသို့ ၂၅၀ ံဖာနှင့် ၃၀-၃၅ မိနစ်ခန့်ဖုတ်ရမည်၊ သို့မဟုတ်သွားသွားတစ်ချောင်းသန့်ရှင်းစွာမထွက်မချင်းမုန့်ဖုတ်ရမည်။
သေတ္တာ၏နောက်ကျောတွင်ပါ ၀ င်သည့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုစိတ်ပူစရာမလိုပါ။ ဤစာရွက်သည် 6'x2 'ကိတ်မုန့် (သို့) ၈'x2' ကိတ်မုန့်သုံးလုံး (ပတ်ပတ်လည်) အတွက်လုံလောက်သော Battery ကိုပြုလုပ်သည်။ ဤနည်းဖြင့်မင်ကတုတ် ၄၀ ကို ၁.၂၅ အောင်စခန့်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောမက္ကတီးတစ်ဘူးလျှင်ဘက်ထရီ ၁.၂၅ အောင်စရှိသည်။ ဆန္ဒရှိပါကကြက်ဥအဖြူ ၄ လုံးကိုဥသုံးလုံးလုံးနှင့်အစားထိုးနိုင်သည်
အနီရောင်ကတ္တီပါ box ကိုကိတ်မုန့်ရောနှောချက်ပြုတ်နည်းများ
jello မပါဘဲ gummies ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
စိုစွတ်သော box ကိုကိတ်မုန့်လုပ်နည်း